မေးခွန်း ရှုခင်းကို download
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #355 by PADA52
ပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျကိုငါရယ်ကဲ့သို့သင်တို့အသည်းအသန် Flyer ဖို့, "တာဝန်ခံအခမဲ့" ဟုအဆိုပါတဦးတည်းအပါအဝင်တို့သည်ကြီးစွာသောဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြတယ်ဆိုပါစို့၏! သင့်ရဲ့ website ကနေငါအခြို့သောလေယာဉ်အလွန်ကောင်းစွာလက်တွေ့ကျကျငါနီးပါး acceleration ကိုဗူးနဲ့ငါ့ FSX ကိုရွှေ edition အတွက်ဒီလေယာဉ်ပျံကိုအသုံးပြုပြီးတာ, အဘိုးအင်း 777-200ER Ultimate ဗူးနဲ့တူတီထွင်သူတို့၏အမျိုးအစုံတွဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသွားပြီ။
Klagenfurt လေဆိပ် (သြစတြီးယား) နှင့် Richmond အင်တာနေရှင်နယ် (VA သို့) အမေရိကန်နိုင်ငံ: ငါအထူးသဖြင့်နှစ်ဦးကိုလေဆိပ်, လမ်းကဒီဇိုင်းသည်အလွန်ကောင်းတဲ့အတူကစမ်းသပ်ပါတယ်, ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီအချို့လေဆိပ်ရဲ့ရှုခင်းစနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ပါဘူးကြောင့်လည်းထင်ရှားစေချင်ပါတယ် နှစ်ခုစလုံး ILS ဆင်းသက်မှုစနစ်နှင့်အတူပြဿနာများ, ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းသက်ရောက်မှုမမြင်ရတဲ့ 30 ခွကေိုလေယာဉ်ပြေးလမ်း 28 အထက်အရာတစ်ခုခုကိုဆန့်ကျင်လေယာဉ်ပျံရှိသည် ဖြစ်. , ILS 02 အပေါ်ဒုတိယတစျခု (Richmond) ကလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏အဆုံးအစားလေယာဉ်ပြေးလမ်း 02 ၏အစဦးတည်သည့်လေယာဉ်ပျံပါစေ။
ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံး၌ငါသူတို့အားအသစ်ကရှုခင်းဖြုတ်င့်နှင့်နှစ်ဦးစလုံး ILS ဿုံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
0.186 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်